Fifadiana ankasitrahana – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 29, 2012 juillet 2, 2012 Laisser un commentaire sur Fifadiana ankasitrahana
« Tsy izao va no fifadiana ankasitrahako: dia ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana. Sy hanaboraka ny fehin’ny zioga, sy ny handefa ny ampahoriana ho afaka, Ary hanapatapaka ny zioga rehetra?… Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va, sy hampiantrano ny manjenjena,… Ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. » Isaia 58: 6-8
Ny fifadiana dia misy zavatra azonao atao tsara nefa mifehy tena tsy hanao izany ianao. Raha sendra tsy salama ianao ohatra, ka mankany amin’ny dokotera mpitsabo, dia omeny fanafody, ary indraindray dia mety misy sakafo hasainy fadianao. Koa raha tsy manaraka izany fepetra izany ianao dia mety tsy handaitra ny fanafody, sady mety tsy ho sitrana ny aretinao. Koa na dia tianao aza ilay sakafo, rehefa te ho sitrana ianao dia fadianao rehefa nasaina hofadianao.
Ny amin’ny Fanahintsika, dia misy ny zava-pady: ny devoly sy ny asany!
Mety mankafy zavatra maro isika : ao ny sakafo, ny fialamboly, ary ny zavatra maro samy hafa tsy ho voatanisa… Nefa izy ireny dia mety hibahana ny fontsika, ka tsy hanomezantsika toerana voalohany ny fitiavana an’Andriamanitra, ary mety hanandevo antsika aza.
Andriamanitra tsy misy tahaka Azy ny Andriamanitsika; tadidio koa anefa fa Andriamanitra saro-piaro Izy! Aoka ny Fitiavana an’Andriamanitra no ataontsika ambonin’ny zavatra rehetra.
Voalaza ao amin’ny Soratra Masina ny tantaran’ireo mpianatry ny Tompo niezaka nandroaka demonia tamin’ny zazalahy marary iray, nefa tsy nahavita izany izy ireo; voalaza fa nositranin’i Jesosy io marary io, ary nilaza tamin’ny mpianany Izy hoe : ‘Iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin’ny fivavahana sy ny fifadian-kanina’ (Matio 17:21).
Ilaina araka izany ny fifadiana, indrindra raha miatrika zava-tsarotra; diniho tsara anefa izao Tenin’Andriamanitra ambara aminao eto izao : Misy ny fifadiana ankasitrahana!
Jesosy aza nanaiky, nanetri-tena ho famonjena antsika!
Mamaha ny fatoran’ny faharatsiana (miverina amin’i Jesosy Kristy), mitory ny FILAZANTSARA amin’ny hafa, mahafoy ny zavatra rehetra ho an’ny Tompo satria mpindrana ihany isika.
Manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona ho Azy (fanatitra velona fa tsy fanatitra alatsa-drà, famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra alatsadrà!) Lazainy eto fa ho tonga ny fanasitranana anao!
Hampahery antsika anie Jesosy Kristy!
Publié parfilazantsaramada juin 29, 2012 juillet 2, 2012 Publié dansUncategorized
Fiaraha-miasa Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana
Araraotina ny fotoana!